Isimada Baay oo kalsoonidii kala noqday dowladda iyo banaan-baxyo maanta ka socda Baydbabo – Radio Daljir
Agoosto 31, 2013 2:11 b 0
Baydhabo, August 31, 2013 – Magaalada Baydhabo ee xaruunta gobolka Baay waxaa saaka ka bilowday banaan-baxyo waa weyn oo looga soo horjeedo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ay hormuud u yihiin waxgaradka iyo indheer-garadka bulshada.
Banaan-baxyada ayaa lagu dhaliilay heshiiskii ay dowladda Soomaaliya la gashay maamulka Jubbaland, heshiiskaas oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Adi-Ababa ee xaruunta dalka Ethopia.
Waxgaradka iyo Malaaqyada gobolka Baay ayaa sheegay in ay xiriirka u jareen dowladda Soomaaliya, waxayna intaas ku dareen in uusan masuul ka tirsan dowladda Soomaaliya iman karin gobollada Bay iyo Bakool.
Malaaq Cali shiine oo Afhayeen u hadlay guddiga ku shiray Baydhabo ee ka soo horjeeda heshiiska Jubbaland iyo dowladda ayaa yiri ? waan ka soo horjeednaa heshiiskaas ay dowladdu la gashay Jubba waa maamul is-magcaabay oo lala heshiiyey, Bay iyo Bakool aayahooda iyaga ayaa ka tashanaya.?
Heshiiskii dowladda iyo maamulka Jubba ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay, in kastoo inta badan siyaasiyiinta iyo maamullada dalka ay soo dhoweeyeen, haddana waxaa jira dhinacyo kale oo diidan, kuwaas oo u arka caqbad hor leh oo dalka soo wajahaysa.